Pyithuhluttaw | Ministry Of Information
Read more about ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၄၈) ရက်မြောက်နေ့ကျင်းပ
ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၄၅) ရက်မြောက်နေ့ကျင်းပ
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး(၄၅)ရက်မြောက်နေ့ကို ယနေ့ နံနက် (၁၀) နာရီတွင် ကျင်းပရာ မေးခွန်း(၆)ခု မေးမြန်းဖြေကြားခြင်း၊ အဆို ၁ ခုတင်သွင်းခြင်းနှင့် အစီရင်ခံစာ ၁ ခု ဆွေးနွေးအတည်ပြုခြင်း တို့ကို ဆောင်ရွက်ကြသည်။
Read more about ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၄၅) ရက်မြောက်နေ့ကျင်းပ
ဥပဒေကြမ်း ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းအောင် (ခ) ဦးထွန်းထွန်းဟိန်၊ တောင်သူလယ်သမားနှင့် အလုပ်သမားရေးရာ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်မြင့် ရန်ကုန်နိုင်ငံရေးသိပ္ပံကျောင်းမှ ဒါရိုက်တာ ဘုတ်အဖွဲ့ဝင် ဦးမျိုးအောင်ထွေး ဦးဆောင်သော အဖွဲ့အားတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ ဥပဒေကြမ်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းအောင် (ခ) ဦးထွန်းထွန်းဟိန်၊ တောင်သူလယ်သမားနှင့် အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်မြင့်တို့သည် ရန်ကုန် နိုင်ငံရေးသိပ္ပံကျောင်းမှ ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ဝင် ဦးမျိုးအောင်ထွေးဦးဆောင်သောအဖွဲ့အား ယနေ့နံနက် ၈ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်အဆောက်အအုံရေးရာ ဆောင်အမှတ် (I-2) အစည်းအဝေးခန်းမ၌ တွေ့ဆုံသည်။
Read more about ဥပဒေကြမ်း ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းအောင် (ခ) ဦးထွန်းထွန်းဟိန်၊ တောင်သူလယ်သမားနှင့် အလုပ်သမားရေးရာ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်မြင့် ရန်ကုန်နိုင်ငံရေးသိပ္ပံကျောင်းမှ ဒါရိုက်တာ ဘုတ်အဖွဲ့ဝင် ဦးမျိုးအောင်ထွေး ဦးဆောင်သော အဖွဲ့အားတွေ့ဆုံ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ကျေးလက်လူမှုဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးရန်လင်း၊ တောင်သူလယ်သမားနှင့် အလုပ်သမားရေးရာ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်မြင့် စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး (FSWG) အဖွဲ့အား တွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ကျေးလက်လူမှုဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးရန်လင်း၊ တောင်သူလယ်သမားနှင့် အလုပ်သမားရေးရာ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်မြင့်တို့သည် စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှု ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး (FSWG) အဖွဲ့အားယနေ့ မွန်းလွဲ၁ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်ရေးရာဆောင် အဆောင် အမှတ် (I-10) အစည်းအဝေးခန်းမ၌ တွေ့ဆုံသည်။
Read more about စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ကျေးလက်လူမှုဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးရန်လင်း၊ တောင်သူလယ်သမားနှင့် အလုပ်သမားရေးရာ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်မြင့် စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး (FSWG) အဖွဲ့အား တွေ့ဆုံ
ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပဥ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး(၄၄)ရက်မြောက်နေ့ကို ယနေ့ နံနက်(၁၀) နာရီတွင် ကျင်းပရာ မေးခွန်း(၆)ခုမေးမြန်းဖြေကြားခြင်း၊ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ် ဥပဒေကို ပြင်ဆင် သည့် ဥပဒေကြမ်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အစီရင်ခံစာတင်သွင်းခြင်းနှင့် အဆို ၁ ခု ဆွေးနွေးအတည်ပြုခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။
Read more about ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပဥ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး(၄၄)ရက်မြောက်နေ့ကျင်းပ
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး)နှင့် ပြည်သူလူထုပူးပေါင်း၍ ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်လှူပွဲနှင့်ဆွမ်းဆန်စိမ်းလှူဒါန်းပွဲကျင်းပ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး သံဃာ့နာယကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ အဂ္ဂမဟာသဒ္ဓမ္မဇောတိကဓဇ ဒေါက်တာဘဒ္ဒန္တဣဒ္ဓိဗလ၏ ဩဝါဒကိုခံယူ၍ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး)နှင့် ပြည်သူလူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဝါဆို သင်္ကန်းကပ်လှူပွဲ နှင့် ဆွမ်းဆန်စိမ်းလှူဒါန်းပွဲကို ယနေ့နံနက် (၉)နာရီကရန်ကုန်မြို့ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ပြည် သာယာလမ်းရှိပရိယတ္တိ၊ ပရိပတ္တိသာသနာပြု မူလဆယ်တောင်ပြည့်ကျောင်း တိုက်၌ ကျင်းပသည်။
Read more about အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး)နှင့် ပြည်သူလူထုပူးပေါင်း၍ ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်လှူပွဲနှင့်ဆွမ်းဆန်စိမ်းလှူဒါန်းပွဲကျင်းပ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့်နှင့်ဇနီး ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌနှင့်ဇနီး ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ဂုဏ်ပြုညစာစားပွဲဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့်နှင့်ဇနီးတို့သည် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ အမျိုးသား လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mr. Chung Sye-Kyun နှင့်ဇနီး ဦးဆောင်သော ကိုရီးယားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ယနေ့ ည ၇ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်အဆောက်အဦ ထမင်းစားခန်းမဆောင်၌ ဂုဏ်ပြုညစာစားပွဲဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံသည်။
Read more about ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့်နှင့်ဇနီး ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌနှင့်ဇနီး ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ဂုဏ်ပြုညစာစားပွဲဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံ
ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၄၂) ရက်မြောက်နေ့ကျင်းပ
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး(၄၂)ရက်မြောက်နေ့ကို ယနေ့ နံနက်(၁၀)နာရီတွင် ကျင်းပရာ မေးခွန်း(၆)ခု မေးမြန်းဖြေကြားခြင်း၊ အဆို(၁)ခုတင်သွင်းခြင်း နှင့် ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အစီရင်ခံစာ တင်သွင်းခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ကြသည်။
Read more about ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၄၂) ရက်မြောက်နေ့ကျင်းပ
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပဥ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၄၀ ရက်မြောက်နေ့ကျင်းပ
တွံတွေးမဲဆန္ဒနယ်ဦးမြင့်လွင်၏ မြို့နယ်တိုင်းတွင် အစိုးရနှင့်အရပ်ဖက်အဖွဲ့ အစည်းများ ပြည်သူများပူးပေါင်းသောစာကြည့်တိုက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းထူထောင်နိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သောဦးဆောင်လမ်းညွှန် ကူညီပံ့ပိုးမှုများ ချမှတ်ဆောင်ရွက်ပေးပါရန် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအား တိုက်တွန်းကြောင်း အဆိုကို ယနေ့ကျင်းပသည့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် လွှတ်တော်ကမှတ်တမ်း တင်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
Read more about ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပဥ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၄၀ ရက်မြောက်နေ့ကျင်းပ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ အောက်လွှတ်တော် House Appropriations Committee ဥက္ကဋ္ဌ Hon. Mr. Rodney Frelinghuysen နှင့် အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့်သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ အောက်လွှတ်တော်၊ House Appropriations Committee ဥက္ကဋ္ဌ Hon. Mr. Rodney Frelinghuysen နှင့် အဖွဲ့အား ယနေ့ညနေ ၃ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော် အဆောက်အအုံ၊ ဇမ္ဗူသီရိဆောင် ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံ တွေ့ဆုံသည်။
Read more about ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ အောက်လွှတ်တော် House Appropriations Committee ဥက္ကဋ္ဌ Hon. Mr. Rodney Frelinghuysen နှင့် အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ